OnePlus 6T ụbọchị mmalite emebere na Europe | Gam akporosis
Nyaahụ a kwadoro ya la OnePlus 6T ụbọchị ngosi. Ọdịdị dị elu nke akara ndị China bụ otu n'ime ekwentị ndị kachasị atụ anya na ọdịda a. Na ihe nlere a, ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ịkwado afọ ya dị mma, nke ọ hụrụla ka ahịa nke ụdị ya gara aga sirilawanyewanye. Tupu ụbọchị nkwuputa ya gosipụtara, enwere asịrị yana ụbọchị ntọhapụ ya.
Achọpụtara na ekwentị ahụ ga-amalite na mbido ọnwa Nọvemba. Ihe nke yiri ka ọ dị ka nke a n’ikpeazụ, ọ bụ ezie na mbata nke OnePlus 6T a na Europe ga-adị n’ụbọchị dị iche karịa ka a tụrụ anya ya.
Ndị ụlọ ọrụ ahụ egosilarịrị ya, Na Nọvemba 6, a ga-ewepụta OnePlus 6T na Europe. Yabụ na ọ gaghị abụ Nọvemba 1 dịka ọ dịbu na mbụ. Fewbọchị ole na ole dị iche na ụnyaahụ ụnyaahụ.
Europe agaghị abụ ebe mbụ OnePlus 6T a na-aga. Kemgbe tupu ebido ya na kọntinent ochie, a na-atụ anya ịmalite ekwentị na India. Ọ ga-abụ na Nọvemba 2 mgbe a na-arụ ọrụ ya na India. Mba ahụ aghọwo otu ahịa kachasị mkpa.
Ya mere, akara ndị China na-achọ ịbawanye ọnụnọ ya na mba a. Dị ka akụkụ dị elu na-eto eto otutu kwa. Yabụ India ga-abụ mba izizi n'ụwa ebe ọ ga-ekwe omume ịzụta OnePlus 6T a. Mgbe ahụ Europe n'ozuzu ga-eso.
A ga-eme ihe ngosi n’Ọktoba 30 nke ngwaọrụ na New York City. Ihe omume nke ga-eme ka ịtụ anya na-atụ anya, na ọ ga-ekwe omume ịgbaso ndụ na chanel YouTube nke akara ndị China. Ka anyị na-enweta ozi gbasara mmalite nke ekwentị ahụ, anyị ga-agwa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Launchbọchị mmalite nke OnePlus 6T na Europe bụ ọkwa ugbu a
Ngwa Google Pixel 3 niile
Nkọwa na onyonyo nke Honor 8C pụtara na VMall: ekwentị mbụ nwere SoC SD632